ငွေဖြည့်၊ငွေစစ်၊အင်တာနက်လျှောက်ရန် အလွယ်တကူပြု့လုပ်နိူင်သော MMTopup. APK ~ မိုးညိုသား
ငွေဖြည့်၊ငွေစစ်၊အင်တာနက်လျှောက်ရန် အလွယ်တကူပြု့လုပ်နိူင်သော MMTopup. APK
ငွေဖြည့်၊ငွေစစ်၊အင်တာနက်လျှောက်ရန် အလွယ်တကူပြု့လုပ်နိူင်သော APK
ကို ဆရာမ ဒေါ်ထားထားလွင် က ရေးပေးထားတာပါ။
ဒီထဲမှာ ဘာတွေ ပြု့လုပ်နိူင်သလဲ ဆိုရင်တော့
မည်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားအတွက်မဆို User ကဖုန်းအမျိုးအစားရွေးပေးစရာမလိုဘဲ
အလွယ်တကူ ငွေဖြည့်ခြင်း၊ အခြားဖုန်းအတွက်ငွေဖြည့်ပေးခြင်း၊ လက်ကျန်ငွေစစ်ခြင်း၊
လက်ကျန်ငွေကို နေ့စဉ်မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင်အလိုအလျှောက်ပုံမှန်စစ်ပေးခြင်း၊
အင်တာနတ်လျှောက်ခြင်း တို့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ apk ရေးပေးလိုက်ပါတယ်…
Menu ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ‘နေ့စဉ်လက်ကျန်ငွေမစစ်ချင်တော့ပါ’ ကိုနှိပ်ပါ…
DOWNLOAD [ 187 kb]
ရေးသားသူ= ဆရာမ ဒေါ်ထားထားလွင်